Archdiocese of Mandalay blog: မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၂၇)
မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၂၆)
Fr.John Maung San
ဖါသာရ်ဂျွန် ဦးမောင်ဆန်းသည် (၁၉၄၃)ခု ဧပြီလ (၂၄)ရက်နေ့တွင် ချမ်းသာရွာ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးလှိုင် ဒေါ်တင်မေတို့ ဖြစ်သည်။ ချမ်းသာရွာ မူလတန်းကျောင်းတွင် စတုတ္ထတန်း အောင်မြင်သည်အထိ သင်ကြားပြီးနောက် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ မေမြို့ စိန်အာလ်ဘက်ကျောင်းတွင်(၁၀)တန်း အထိ ပညာသင်ကြားပြီးနောက် အင်္ဂလိပ်စာနှင့် လက်တင်စာများကို အထူး သင်ကြားခဲ့ရသည်။ (၁၉၆၇-၆၈) နှစ်များမှစ၍ ရန်ကုန်ရှိ ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်တွင် ဖီလိုဆိုဖီနှင့် သီအိုလိုဂျီပညာရပ်များ သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၇၅) ခုနှစ် ဧပြီလ (၁၈)ရက်နေ့တွင် မန္တလေး ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒရယ်ဘုရားကျောင်း၌ ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် အေဦးဘခင်လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။
ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူပြီး (၂)လလောက် အကြာတွင် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်၏ အမိန့်အရ ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့တွင် ချင်းစာ သင်ကြားရန် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထိုမှတဆင့် (၁၉၇၅)ခု ဒီဇင်ဘာလ (၁၂)ရက်နေ့တွင် နာရိန်းရွာသို့ သွားရောက်၍ ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရသည်။ ၄င်း နေရာတွင်(၁၀)နှစ်ခန့် အုပ်ချုပ်ပြီး ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော် အေဦးသန်းအောင်၏ အမိန့်အရ (၁၉၈၅)ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင် ချောင်းဦး ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရ၍ ချောင်းဦး မုံရွာ၊ နဘက်၊ ဂန့်ဂေါမြို့များကို ကြည့်ရှုရသည်။ ၄င်းပြင် မုံရွာတဘက်ကမ်းရှိ ကြေးနီတောင်၊ ဂန့်ဂေါမြို့အနီးတ၀ိုက်ရှိ ကျေးရွာငါးရွာနှင့် နဘက်အနီးရှိ ဆီမီးခုံမြို့များကိုပါ တာဝန်ယူ ကြည့်ရှုရသည်။
(၁၉၉၂) ခုနှစ်တွင် ချောင်းဦး ဘာသာဝင်များ၊ ရေသန့် ရရှိရေးအတွက် စိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ် အကူအညီဖြင့် ငွေကျပ် တစ်သိန်းတစ်သောင်း အကုန်အကျခံ၍ အ၀ီစိတွင်းတူးကာ ရေစုတ်စက်ဖြင့် ရေဖြန့်ပေးဝေနိုင်ခဲ့သည်။ ရပ်ရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ် အကူအညီဖြင့် သိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာ အောင်မြင်ခဲ့သည်။
(၁၉၉၃)ခု သြဂုတ်လ (၁၄)ရက် ညသန်းခေါင်ကျော်အချိန်တွင် မုံရွာမြို့ ဒေါနခြံရပ်ကွက်ရှိ ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် ဘုန်းကြီးနေကျောင်း ရှေ့မျက်နှာစာတွင် ယာယီနေထိုင်ကြသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကပ်မိုး ကပ်ကာ အိမ် (၂၃)လုံး မီးလောင်ကျွမ်း ခံရသည်။ မန္တလေးသာသနာပိုင် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် အေဦးသန်းအောင် ဦးဆောင်မှုဖြင့် အစိုးရ အထက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းကာ မီးဘေးဒုက္ခသည်များနှင့် ဘုရားကျောင်းမြေပေါ်တွင် နေထိုင်သူ အားလုံး အိမ်ထောင်စု (၈၅)အိမ်ထောင်အား သာသနာမှ မြေ၀ယ်၍ (၁၉၉၄)ခု မတ်လ (၁၆)ရက်နေ့မှ စ၍ မုံရွာမြို့ နန္ဒ၀န်ရပ်တွင် နေရာချထားပေးခဲ့သည်။ ဘုရားကျောင်း မျက်နှာစာတွင် မိခင်နှင့် ကလေးများစောင့်ရှောက်ရေးဌာန ဖွင့်ရန်အတွက် အစိုးရက မြေတစ်နေရာတောင်းဆိုရာ ဘုရားကျောင်း၏ နောက်ပိုင်း တနေရာတွင် သတ်မှတ်ပေးလိုက်သည်။ ဘုရားကျောင်း ၀တ္တု ကံမြေပေါ်တွင် နေထိုင်ခဲ့ကြသော ဘာသာဝင်များ စားဝတ်နေရေး ပြေလည်စေမှုနှင့် လူအဆင့်အတန်း မြင့်မားရေးအတွက် ဘုရားကျောင်းမြေပေါ်တွင် သာသနိကတိုက်ခန်းများ ဆောက်လုပ်ရန် စီမံပြီး (၁၉၉၄)ခု သြဂုတ်လ (၁၇)ရက်နေ့တွင် သာသနိကတိုက်ခန်းများ အုတ်မြစ်ချခဲ့သည်။
မန္တလေး သာသနာပိုင်ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော် အေဦးသန်းအောင်၏ လမ်းညွှန်သည့်အတိုင်း မန္တလေးမှ အင်ဂျင်နီယာ ဦးမောင်မောင်နှင့် ပန်းရံအဖွဲ့၊ လက်သမားအဖွဲ့တို့က မုံရွာမြို့ သာသနိကမြေပေါ်တွင် ဈေးဆိုင် တိုက်ခန်းများ တည်ဆောက်ကြရာ (၁၉၉၅)ခု ဒီဇင်ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် ဈေးဆိုင်တိုက်ခန်းများ ဖွင့်ပွဲနှင့် ခရစ္စမတ်ညစာစားပွဲ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ ကျန်မြေနေရာများကို ဈေးဆိုင်တုိက်ခန်း ဆက်လက် တည်ဆောက်ရာ (၁၉၉၇)ခု ဧပြီလတွင် နောက်ထပ် ဈေးဆိုင်တိုက်ခန်း (၄၃)ခန်း တည်ဆောက်ပြီးစီး သွားသဖြင့် မုံရွာမြို့ ကက်သလစ်ခရစ်ယာန် သာသနာဝတ္တကံမြေပေါ်တွင် ဈေးဆိုင်တိုက်ခန်း (၉၅)ခန်း ပြီးစီးသွားသည်။ နောက်ဆောက်သော ဈေးဆိုင် တိုက်ခန်း(၄၃)ခန်းကို (၁၉၉၇) မေလ(၁)ရက် စိန်ဂျိုးဇက်ပွဲနေ့တွင် ဖွင့်ပွဲ အခန်းအနား ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းတိုက်ခန်းများအား စာချုပ်စနစ်ဖြင့် ဘာသာဝင်များအား နေရာ ချထားပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ချောင်းဦးမြို့ ဖါသာရ်မောင်ဆန်းနှင့် မန္တလေးမှ အင်ဂျင်နီယာ ဦးမောင်မောင်တို့ ဦးစီးကာ အလျား ၇၈ပေ၊ အနံ ၃၃ပေရှိသော နံကပ်သွတ်မိုး စိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ်ခန်းမကို (၂၃.၁၁.၉၆)နေ့တွင် ပန္နက်ချ၍ စတင် ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာ (၁၉၉၇)ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးသဖြင့် (၁၉၉၇) သြဂုတ်လ (၁၅)ရက်နေ့တွင် စိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ်ခန်းမ ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပခဲ့သည်။ ခန်းမ ဖွင့်ပွဲသို့ မွန်ဆီညော် ကညုဦးလွန်းအောင် ဖါသာရ်ဂျွန်မောင်နီ၊ ဖါသာရ်ဂျွန်အေးကျော်၊ ဖါသာရ်ဦးကျော်နိုင်၊ ဖါသာရ်ဝင်းရွှေနှင့် စိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ် မန္တလေးသာသနာ အုပ်စုကောင်စီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ နဘက်၊ မုံရွာ၊ ဂန့်ဂေါ၊ မန္တလေးမှ ဘာသာဝင်များ တက်ရောက်ကြသည်။ စ်ိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ် ခန်းမ ကုန်ကျငွေစုစုပေါင်းမှာ (၁၆၂၄၁၃၀) တစ်ဆယ့်ခြောက်သိန်း နှစ်သောင်းလေးထောင် တစ်ရာသုံးဆယ်ကျပ်တိတိဖြစ်၍ မန္တလေးသာသနာမှ (၁၅၀၀၀၀)ကျပ်၊ ဖါသာရ် ဂျွန်အေးကျော်မှ (၁၃၄၂၅၇၈)ကျပ် ဘာသာဝင်များမှ (၁၃၁၅၅၂)
ကျပ် ပါဝင် လှူဒါန်းကြသည်။
ဖါသာရ် ဂျွန်မောင်ဆန်းသည် ချောင်းဦး ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွက် မြေတိုးချဲ့ ၀ယ်ယူပြီး အုတ်တံတိုင်း ကာရံခဲ့သည်။ ချောင်းဦးဘုရားကျောင်း ရင်ပြင်တစ်ခုလုံး ကျောက်ပြားခင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ဖါသာရ် ဂျွန်မောင်ဆန်းသည် (၂၀၀၂) ခုနှစ် ဂျွန်လမှ စ၍ မန္တလေးမြို့ သံဝင်းရပ် စိန်မိုင်ကယ်ဘုရားကျောင်းတွင် ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်းဆောင်ရသည်။
Fr. Peter U Mg Shwe
ဖါသာရ်ပီတာ မောင်ရွှေသည် (၁၉၄၆)ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၂)ရက်နေ့တွင် မုံလှရွာ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးဖရန်စစ်နှင့် ဒေါ်မြိုင်တို့ဖြစ်သည်။ မုံလှရွာ အစိုးရမူလတန်းကျောင်းမှ စတုတ္ထတန်း အောင်မြင်ပြီး (၁၉၅၈)ခုနှစ် မေလတွင် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ မေမြို့ စိန်အာလ်ဘတ်ကျောင်းတွင်(၁၀)တန်းအထ်ိ ပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၆၇) ခုနှစ်မှ စ၍ ရန်ကုန်မြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ် မေဂျာဆေမီနာရီတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၇၅) ခုနှစ် ဧပြီလ (၁၈)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒရယ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီးနောက် တောင်ပိုင်း ချင်းတောင် မင်းတပ်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများသို့ သွားရောက်၍ သာသနာပြုခဲ့စဉ် ဘာသာဝင် တဦးတစ်ယောက်မျှ မရှိသေးသော်လည်း (၁၄)နှစ် သာသနာပြုခဲ့ရာ လူပေါင်း (၈၀၀)ခန့် ဆေးကြောခြင်း ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ရွာငယ် (၃၂)ရွာကို ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။ မိမ်ိ နေထိုင်သော ရိုကျေးရွာရှိ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ဆေးရုံနှင့် ရဲစခန်းတို့ကို လျှပ်စစ်မီးရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့သဖြင့် ချင်းတောင်တွင် ပထမဆုံး လျှပ်စစ်မီးရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သူ ဖြစ်သည်။ ကလေးများ ပညာရေးအတွက် ဘော်ဒါကျောင်း ဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
(၁၉၈၉) ခု မေလ (၁)ရက်နေ့မှ စ၍ ကျောင်းထိုင် ဘုန်းကြီးအဖြစ် ရွာတော်ရွာ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှု ခဲ့ရသည်။ ရွှေဘို ညောင်ပင်သာ အစိုးရကားလမ်းနှင့် ရွာတော်ရွာ ဆက်သွယ်ထားသော
လမ်းမကြီးကို ငွေကျပ်လေးသောင်းကျော် အကုန်အကျခံ၍ ပြုပြင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာ ရေရရှိရေးအတွက် အ၀ီစိတွင်း (၇)တွင်း တူးဖေါ်ပေးခဲ့သည်။ ရွာ၏ တောင်ဘက် (၃)မိုင်ခန့်အကွာရှိ အစိုးရ ဓါတ်အားလိုင်းမှ ကျေးရွာ တရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ (၁၉၉၆)ခု ဧပြီလ (၆)ရက် စနေနေ့ကြီး ည မီးဖန်ဆင်းအပြီးတွင် လျှပ်စစ်မီး စလင်းသည်။ တရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးရရှိအောင် ငွေကျပ် (၂၅)သိန်းခန့် အကုန်အကျခံ၍ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ဖါသာရ်မောင်ရွှေသည် ကျောင်းထိုင် ဘုန်းကြီးအဖြစ်နှင့် ရွာတော်ရွာသို့ ရောက်လာသော အချိန်တွင် ရွာတော်ရွာ၏ တိုးပွားလာသော လူဦးရေပမာဏနှင့် ဘုရားကျောင်း၏ ၀င်ဆန့်မှုမှာ အချိုး မကိုက်ညီတော့သဖြင့် မန္တလေး သာသနာပိုင် ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော် အေဦးသန်းအောင်ကို တင်ပြရာ ဆရာတော်က ဘုရားကျောင်းဆောင် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန် သဘောတူခဲ့သည်။ ဖါသာရ်မောင်ရွှေသည် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်၏ လမ်းညွှန်မှုကို အပြည့်အ၀ခံယူကာ သာသနာတော်၏ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် သံကူကွန်ကရစ် အသုံးပြုသော ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအသစ်ကို ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ကျောင်းအသစ် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ဘုန်းတော်ကြီး မောင်ရွှေနှင့် မန္တလေးမြို့မှ အင်ဂျင်နီယာဦးမောင်မောင်တို့က ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲ၍ မန္တလေးမှ ပန်းရံဆရာကြီး ဦးစိန်ကျော် လက်သမား ဆရာကြီးဦးသန်းထီနှင့် သံချည်သံကွေးလုပ်ငန်း ဆရာကြီးဦးကျော်စိုးတို့က ဦးစီး၍ ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။
(၁၉၈၉) ဒီဇင်ဘာလ (၂၅)ရက်နေ့တွင် သံကူကွန်ကရစ် အသုံးပြုသော ဘုရားကျောင်းသစ် အဆောက်အဦးကို ပန္နက်ရိုက်လုပ်ငန်း စတင်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ (၂၇)ရက်နေ့တွင် ရွာသူရွာသား ဘာသာဝင်များ၏ လုပ်အားဖြင့် မြေတူးလုပ်ငန်း စတင်ခဲ့သည်။ သဲရရှိရေးကို ကျေးရွာလူငယ်များမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ကျေးရွာမှ ဆောက်လုပ်ရေး တာဝန်ခံ အသက်(၈၃)နှစ် အရွယ်ရှိ ဦးဘကျော်သည် ဘုရားကျောင်း အဆောက်အဦးအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများကိုဝယ်ရန် ရွာတော်မှ (၆)မိုင်ဝေးသော ရွှေဘိုမြို့သို့ တနေ့လျှင် နှစ်ကြိမ်မှ သုံးကြိမ်အထိ စက်ဘီးဖြင့် သွားရောက်၍ ၀ယ်ခဲ့သည်။ တနေ့လျှင် (၂၄)မိုင်မှ (၃၆)မိုင်ထိ စက်ဘီးဖြင့် သွားခဲ့ရသည်။
ယခင်က ဖါသာရ်အာလိုက်ဆီနှင့် ဖါသာရ်လောရင်းတို့ တည်ဆောက်ခဲ့သော ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ အကျယ်အ၀န်း (၃၂၀၀) စတုရန်းပေ ရှိသည်။ ယခု တည်ဆောက်ခဲ့သော ဘုရားကျောင်းသစ်မှာ အကျယ်အ၀န်း (၆၀၀၀) စတုရန်းပေရှိသည်။ ဘုရားကျောင်းသစ်၏ မျက်နှာကျက်ကို ကျွန်းကွက်များဖြင့် အလှဖေါ်ထားသည်။ ဘုရားကျောင်းသစ်သည် (၁၉၉၁)ခု မေလ (၃)ရက်နေ့တွင် ပြီးစီးသည်။ ငွေကျပ် (၂၆)သိန်း ကုန်ကျသည်။
(၁၉၉၆)ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၀)ရက်နေ့တွင် ဘုရားကျောင်းသစ်ကို (၁၀ဲx၄၀ဲ) တခန်း တိုးချဲ့ပြီး ဘုရားကျောင်းတည့်တည့်တွင် သံကူကွန်ကရစ် ခေါင်းလောင်းစင် တည်ဆောက်ရန် အုတ်မြစ်ချခဲ့သည်။ ဘုရားကျောင်းသစ် တခန်းတိုးချဲ့လိုက်သဖြင့် ဘုရားကျောင်းသစ်၏ အကျယ်အ၀န်းမှာ (၆၄၀၀)စတုရန်းပေ ဖြစ်သွားသည်။ ခေါင်းလောင်းစင် အသစ်၏ အမြင့်ပေမှာ (၈၅) ပေ ခေါင်းလောင်းစင် အောက်ခြေ အကျယ် (၁၂ဲx၁၂ဲ) အုတ်မြစ်အနက်(၁၂ဲ) ပေရှိသည်။ ခေါင်းလောင်းစင် အသစ်ကို (၁၉၉၆)ခု ဇူလိုင်လ (၃၀)ရက်နေ့တွင် ပြီးစီးသည်။
ရွာသူရွာသားများ သောက်ရေသန့် ရရှိရေးအတွက် ကာရီတာစ် မန္တလေး၏ အကူအညီဖြင့် အနက်ပေ (၃၀၀) ရှိသော စက်ရေတွင်း၊ ရေစုတ်စက်နှင့် ရေလှောင်ကန်တို့ကို ငွေကျပ် (၅၁၄၉၈၁) အကုန်အကျခံ၍ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ (၂၇.၁၁.၉၈)နေ့တွင် စက်ရေတွင်း ရေစုတ်စက်နှင့် ရေလှောင်ကန် ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ ဖွင့်ပွဲ အခန်းအနားသို့ မွန်ဆီညော် ကညုဦးလွန်းအောင်၊ ဖါသာဂျွန် ဦးအေးကျော်၊ ဖါသာရ်ပီတာ ဦးစိန်ရွှေ၊ ဖါသာရ်ဖိလစ် ဦးဘရွှေ၊ ဖါသာရ်အေ ဦးဟံသာ၊ ဖါသာရ်မာကု ဦးတင်ဝင်း၊ ဖါသာရ် ဒေါမနစ် ဦးဂျိုတု၊ ဖါသာရ်ဆေရာ ဦးမြင့်စိုး၊ ဖါသာရ်ပီတာ မျိုးအောင်၊ ဖါသာရ် ရေးဖီးအဲလ် ဦးကျော်ဆန်း၊ ဖါသာရ်အေ ဦးဝင်းရွှေ၊ မန္တလေးမှ ဆရာဦးအောင်ညွှန့်၊ ဗိုလ်ကြီးသိန်းထွန်း၊ ဦးခင်မောင်၊ ဦးစိုးနိုင်၊ ရွာတော်ရွာမှ စစ္စတာလေတီဆီယား၊ စစ္စတာအေလီဇဘက်၊ စစ္စတာ ဂရေစီတို့နှင့် ရွာသူရွာသား (၈၀၀)ခန့် တက်ရောက်ကြပါသည်။
(၂၀၀၀)ပြည့်နှစ် မတ်လ (၃)ရက်နေ့တွင် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသစ် ကောင်းကြီးပေးပွဲ၊ ခရစ်တော်၏ မွေးနေ့နှစ် (၂၀၀၀) ပြည့်ပွဲတော်နှင့် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် ပီတာ စိန်ရွှေ၏ ရဟန်းဝါတော် (၂၅)နှစ်မြောက် ငွေရတုသဘင်ပွဲတော်ကို တပေါင်းတည်း ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းပွဲတော်သို့ မန္တလေးသာသနာပိုင်ချုပ် ဆရာတော် အေဦးသန်းအောင်၊ ဖါသာရ် အေဦးကိုလေး (စစ်ကိုင်း)၊ ဖါသာရ် ဟံသာ(ရွှေဘို) ဖါသာရ် ပြုံးချို(သဲဖြူ) ဖါသာရ် ဂျော်ဂျီ(ချောက်)၊ ဖါသာရ် ကျော်ဆန်း(ပြင်ဦးလွင်) ဖါသာရ်ဂျိုတု (သံဝင်းမန္တလေး) ဖါသာရ် မောင်မောင်ခင် (ချင်းညောင်ပင်သာ)၊ ဖါသာရ်မာကု တင်ဝင်း(မန္တလေး) ဖါသာရ် ဦးခင်မောင်ထွေး (ချောင်းရိုး) ဖါသာရ် ဘရွှေ(မုံလှ)၊ ဖါသာရ် မောင်ဆန်း(ချောင်းဦး)၊ ဖါသာရ် အက်ဒ၀င်(အနီးစခမ်း)၊ ဖါသာရ် ၀င်းရွှေ(စိန်ဇေးဗီးယားမန္တလေး) ဖါသာရ် ကျော်နိုင်(သရက်ခုံ) ဖါသာရ် တင်ထွန်း(ချမ်းသာရွာ)။ ဖါသာရ်ပီတာ မြအောင်(ချမ်းသာရွာ)၊ ဖါသာရ် ပီတာမျိုးအောင် (ဇော်ဂျီ)၊ ဖါသာရ်အေးကျော် (စိန်သောမတ် မန္တလေး)၊ဖါသာရ် ထွန်းမြင့် (ရဟန်ျးြဖစ်သင်ကျောင်း-ပြင်ဦးလွင်) ဖါသာရ် မိုင်ကယ်၊ ဖါသာရ် အာသာဖါ(လားရှိုး)၊ ဖါသာရ် ဘသက်(ပြင်ဦးလွင်) ဖါသာရ် တင်ထွန်း(စိန်သောမတ်စ်-မန္တလေး)တို့ တက်ရောက်ကြသည်။ ရေဦး၊ ချောင်းရိုး၊ ချမ်းသာရွာ၊ မုံလှ၊ ရွှေဘို၊ မန္တလေး၊ ဇော်ဂျီဘာသာဝင်များလည်း တက်ရောက်ကြသည်။ (၂၀၀၂)ခုနှစ် ဇွန်လမှစ၍ ပြင်ဦးလွင်မြို့ အပြစ်မဲ့သန္ဓေယူသော သခင်မ ဘုရားကျောင်း ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်းရသည်။
Fr. Augustine U Han Tha
ဖါသာရ် သြဂတ်စတင်း ဦးဟန်သာသည် (၁၉၃၂)ခု မေလ (၂၇)ရက်နေ့တွင် မကွေးခရိုင် မြို့သစ်မြို့နယ် မကြီးချိုရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးဘိုးရင် ဒေါ်သွဲ့တို့ဖြစ်သည်။ သူငယ်တန်းမှ တတိယတန်းအောင်သည်အထိ ချင်းညောင်ပင်သာရွာ မူလတန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ စတုတ္ထတန်းမှ သတ္တမတန်းအောင်သည် အထိ သရက်မြို့ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၅၅)ခုနှစ်တွင် သတ္တမတန်းအောင်သည်။ ထိုနောက် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းဝင်၍ ဆက်လက် ပညာသင်ဆည်းပုးရာ စိန်အာလ်ဘက်ကျောင်းမှ ဟိုက်စကူး အောင်မြင့်ခဲ့သည်။
ထိုနောက် (၁၉၆၄)ခုနှစ်မှ (၁၉၆၉) အထိ ရန်ကုန် ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်တွင် ပညာဆည်းပူးခဲ့သည်။ (၁၉၆၉) ခုနှစ်မှ (၁၉၇၁) ခုနှစ်အထိ မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင် ဖါသာရ်ဖိလစ် ဦးလင်းနှင့် အတူ ကျောင်းသားများကို ကြည့်ရှု တာဝန်ယူ ရသည်။ ထိုနောက် (၁၉၇၁)ခုနှစ်မှ(၁၉၇၅)အထိ ဖါသာရ်ဖိလစ်နှင့် အတူ မုံလှရွာတွင် ကလေးများထိန်းခြင်း၊ ဘုရားကျောင်း ကြည့်ရှုခြင်း၊ ပညာဆည်းပူးခြင်းတို့ လုပ်ကိုင်ရသည်။ (၁၉၇၅) မှ (၁၉၇၈)ထိ မန္တလေး ကာသီဒရယ်ကျောင်းတွင် ဆရာတော်အေဦးဘခင် လက်အောက်တွင် နေရသည်။ (၁၉၇၈)ခု ဇန္န၀ါရီလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူသည်။ ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီး နောက် (၁၉၇၉) ခု အောက်တိုဘာလအထိ ဆရာတော်ကျောင်းတိုက်တွင် အမှုထမ်းရသည်။ (၁၉၇၉) ခု အောက်တိုဘာလ (၃၀)ရက်က စပြီး မန္တလေးမြို့ စိန်ဂျိုးဇက်အုပ်စု ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုရသည်။ စိန်ဂျွန်း၊ စိန်ပန်း၊ တခွန်တိုင်၊ စစ်ကိုင်း ရွာထောင်တို့ကိုလည်း တာဝန်ယူရသည်။ (၁၉၉၀) ပြည့်နှစ် ဂျွန်လ (၆)ရက်နေ့မှ စ၍ ရွှေဘို သာသနာနယ် တဲကြီးရွာတွင် နေထိုင်၍ ဘာသာဝင်ရွာငယ်များကို လှည့်လည် ကြည့်ရှုသည်။
Fr. John Aye Kyaw
ဖါသာရ်ဂျွန် ဦးအေးကျော်သည် (၁၉၅၉)ခု မတ်လ (၂၉)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးလှသောင်း ဒေါ်မေမေတင်တို့ ဖြစ်သည်။(၁၉၇၅)ခု မေလ (၁၅)ရက်နေ့တွင် မေမြို့ စ်ိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး (၁၉၇၆) မေလ (၁၄)ရက်နေ့တွင် ကိုရင်သင်္ကန်း ရသည်။ (၁၉၇၆) ခုနှစ်မှ (၁၉၈၂)ခုနှစ် မတ်လအထိ ရန်ကုန် မေဂျာ ရဟန်းဖြစ်တက္ကသိုလ် ရဟန်းတို့ တတ်အပ်သော ဖီလိုဆိုဖီပညာနှင့် သီအိုလိုဂျီပညာများ သင်ယူခဲ့သည်။ (၁၉၈၃)ခု ဇန္န၀ါရီလ (၂၃)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒရယ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် အေဦးသန်းအောင် လက်တော်မှ ရဟန်း သိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။
ရဟန်း သိက္ခာခံယူပြီးနောက် (၁၉၈၃)ခု ဇွန်လမှ (၁၉၈၉)ခု နိုဝင်ဘာလအထိ အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့သို့ သွားရောက်၍ Pontifical Biblical Institute တွင် ကက်သလစ် သမ္မာကျမ်းစာဆိုင်ရာ အတတ်ပညာ သင်ကြားခဲ့ရာ Licentiate ပြီးစီးခဲ့သည့် အတွက် SSL ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ (၁၉၉၀)ခုနှစ်မှ (၁၉၉၁)ခုနှစ်အထိ မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင် ၀ိညာဉ်လမ်းညွှန် ဘုန်းတော်ကြီး အဖြစ် တနှစ်တာ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၁) ခုနှစ်မှ (၂၀၀၁)ခုနှစ် အထိ မန္တလေးမြို့ စိန်သောမတ်စ် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင် ကျောင်းအုပ် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်၎င်း၊ (၁၉၉၄)မှ(၂၀၀၁)ခုနှစ် အထိ မန္တလေးမြို့ စိန်ဂျွန်း ဘုရားကျောင်း ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်၎င်း တာဝန်ယူခဲ့သည်။ (၂၀၀၂) ခု ဧပြီလမှ (၂၀၀၃)ခုနှစ် ဧပြီလအထိ မန္တလေး ကက်သလစ်သာသနာ ဘဏ္ဍာရေးမှုးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး (၂၀၀၃) မေလမှ စ၍ ရန်ကုန်မြို့တွင် နေထိုင်ကာ ကက်သလစ်သမ္မာကျမ်းစာတော် ဘာသာပြန်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် တာဝန်ယူရသည်။
Fr. George U Khin Mg Thwe
ဖါသာရ် ဂျော့ ဦးခင်မောင်ထွေးသည် (၁၉၅၆)ခု ဧပြီလ (၁၆)ရက်နေ့တွင် စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ ဇော်ဂျီရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဂျိုးဇက် ဦးတင်မောင်နှင့် ထရေဇားဒေါ်နုတို့ ဖြစ်သည်။ သူငယ်တန်းမှ ဒုတိယတန်းအထိ မန္တလေးမြို့ စိန်ပီတာ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ပြီး၊ တတိယတန်းနှင့် စတုတ္ထတန်းကို အမရပူရမြို့နယ် ဥယျာဉ်တော်ရွာ မူလတန်းကျောင်းတွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ပဉ္စမတန်းမှ အဌမတန်းအထိ မြစ်ငယ်မြို့ အစိုးရ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ပညာ ဆက်လက်သင်ကြား ခဲ့သည်။ (၁၉၇၂)ခု၊ မေ (၁၆) ရက်နေ့တွင် မေမြို့ စိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ န၀မတန်းနှင့် ဒဿမတန်းကို မေမြို့ အမှတ် (၄) အထက်တန်းကျောင်းတွင် သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၇၇)ခု (၁၉၈၃)အထိ ရန်ကုန်မြို့ မေဂျာ ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်တွင် ပညာ ဆက်လက် ဆည်းပူးခဲ့သည်။ (၁၉၈၃) ဧပြီလ (၂၂)ရက်နေ့တွင် စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် ဇော်ဂျီရွာ၌ ဆရာတော် အေဦးသန်းအောင် လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။
ရဟန်း သိက္ခာခံယူခဲ့ပြီးနောက် မန္တလေးမြို့ ဆရာတော်ကြီး ကျောင်းတိုက်တွင် နေထိုင်၍ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒရယ်၊ အမရပူရ၊ စစ်ကိုင်း၊ ရွာသစ်ကြီး၊ ဘာသာဝင်များနှင့် စိန်မိုင်ကယ် အုပ်စုဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။ စိန်မိုင်ကယ်အုပ်စု ဘာသာဝင်များကို (၁၉၉၁)ခုနှစ်အထိ ဆက်တိုက် ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။(၁၉၈၅) ခုနှစ်မှ (၁၉၉၀)ပြည့်နှစ်အထိ မန္တလေးမြို့ စိန်သောမတ် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းကို ကြည့်ရှု အုပ်ချုပ်ခဲ့ရသည်။ သံဝင်း စိန်မိုင်ကယ်အုပ်စုမှာ နေထိုင်စဉ် စိန်မိုင်ကယ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း (၇၅)နှစ်မြောက် စိန်ရတုသဘင်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ (၁၉၈၆)ခုတွင် စိန်မိုင်ကယ်အုပ်စုအတွက် ဒဏ်ဆပ်ဖြေခြင်း သီလရှင်များ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဘုန်းကြီးနေကျောင်းကိုလည်း ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ (၁၉၈၉)ခုတွင် ဟောခန်းမ ဆောက်လုပ်ပြီးစီး၍ (၁၉၉၀)တွင် ဟောခန်းမ ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။
(၁၉၉၁) ခုနှစ်မှ (၂၀၀၁)ခုနှစ် အထိ တန်ဆည်မြို့နယ် ချောင်းရိုးရွာ ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်နှင့် ချောင်းရိုး ရေဦး ရွှေပြည်သာ၊ ဒီပဲယင်း၊ လမ်းဆုံ၊ တန့်ဆည်ရှိ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။ (၁၉၉၁) ခုနှစ်မှ စ၍ ချောင်းရိုးရွာတွင် ဗေလန်ကန်နီပွဲတော် စတင် ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ ချောင်းရိုးရွာ ခရစ်္စတီယန်တို့အား မှိုင်းမသော သခင်မဘုရားကျောင်း ရာပြည့်ပွဲတော်အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်သောအားဖြင့် ဘုရားစင် ပရ၀ုဏ် ကြွေပြားများ ခင်းခဲ့သည်။ ဘုန်းကြီးနေကျောင်းနှင့် ခေါင်းလောင်းစင် ပြုပြင် မွမ်းမံနိုင်ခဲ့သည်။ ဘုရားကျောင်း ဆေးသုတ် နိုင်ခဲ့သည်။ ဆရာကြီး ဦးရင်မောင်ကို ရည်စူး၍ ဘုရားစကားသင်ရန်နှင့် ပွဲလမ်းသဘင် အခန်းအနားများ အသုံးပြုရန် ဦးရင်မောင်ခန်းမကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဘုရားကျောင်း မြောက်ပေါက် သံတံခါး တပ်ဆင်ခဲ့သည်။
(၁၉၉၉) ခု မတ်လ (၁၈)ရက်နေ့တွင် ချောင်းရိုးရွာ ဘုရားကျောင်း ရာပြည့်ပွဲတော်ကို ကျင်းပ နိုင်ခဲ့သည်။ နံနက် (၆)နာရီတွင် မန္တလေးသာသနာပိုင် ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော် အေဦးသန်းအောင်နှင့် ဘုန်းတော်ကြီး အပါး (၄၀)နှင့်အတူ မစ္ဆား ပူဇော်ကြသည်။ မစ္ဆားအတွင်း ချောင်းရိုးအုပ်စုတွင် ပါဝင်ကြသော ချောင်းရိုး၊ ရေဦး-ညောင်ကိုးပင်၊ လမ်းဆုံ၊ ကဒူးမ၊ ရွှေကတန်း၊ ကျွန်းလှတို့မှ ဘာသာဝင် ကလေးပေါင်း (၄၆၉)ဦးကို ဆရာတော်မှ ခရစ္ဆမားပေးခဲ့ပြီး မန္တလေးသာသနာမှ ဘရာသာရ် ဂျိုးဇက်သက်လွင်နှင့် ဘရာသာရ် ဖိလစ်တင်ထွန်းတို့ကို ဦးပဉ္စင်းကြီးသိက္ခာ ပေးခဲ့သည်။ မစ္ဆားအပြီးတွင် ချောင်းရိုးရွာ ဇာတိဘွား ပျံလွန်တော်မူသွားသော မန္တလေး သာသနာပိုင် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် အေဦးဘခင်၏ ရုပ်တုပုံတော်ကို ရာပြည်ပွဲ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ရာပြည့်ကျောက်တိုင်အနီးတွင် ပလ္လင်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ နံနက် (၁၀)နာရီတွင် ရာပြည့်ပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးအပါး (၁၀၀)ကို ဖိတ်ကြား၍ နေ့ဆွမ်းဖြင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံသည်။ နေ့လည်တွင် မန္တလေးမှ ခေတ်ပေါ်တီးဝိုင်းဖြင့် ပရိဿတ်များအား ဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့သည်။ ညနေ
(၆)နာရီတွင် ရာပြည့် အထိမ်းအမှတ် ကျောက်တိုင်ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ ညပိုင်းတွင် မန္တလေးဇာတ်ကြီးဖြင့် နှစ်ည ဧည့်ခံနိုင်ခဲ့သည်။
လမ်းဆုံဘုရားကျောင်းကို အုတ်တံတိုင်းခတ်၍ သံတံခါး တပ်ဆင်နိုင်ခဲ့သည်။ တန့်ဆည်မြို့ရှိ ဘုရားကျောင်း၊ ဘုရားစင် ပရ၀ုဏ်ကို ပုံစံကျအောင် အုတ်ခင်းပြုပြင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ခေါင်းလောင်းစင်ကိုလည်း တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်းလှမြို့ဟောင်းမှ မြို့သစ်သို့ ရွှေ့ပြီးနောက် မြို့သစ်အတွက် မြေကွက်ဝယ်၍ ဓမ္မဆရာနေရန်နှင့် စုပေါင်းဝတ်ပြုရန် အဆောင်တစ်ခု ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ရွှေပြည်သာ(ညောင်ကိုးပင်) ယခင်က မြေစိုက်ဘုရားကျောင်းကို မြေစိုက် ပုံစံ အုတ်ခံဖြင့် မြှင့်ကာ ပြုပြင် မွမ်းမံခဲ့သည်။
မန္တလေး ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် အေဦးသန်းအောင်၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၄၀)လောက်က ပျောက်ဆုံးနေသော ဘာသာဝင်များကို ရှာဖွေခဲ့ရာ ဒီပဲရင်းမြို့အနီး ယင်းတော်ရွာ ဗုဒ္ဓဘာသာရွာမှ ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၄င်း ဘာသာဝင် အိမ်ထောင်စုများကို ဒီပဲရင်းမြို့ကွက်သစ်တွင် (၄၀x၆၀)ပေ မြေကွက် (၂၅)ကွက်ကျော် ၀ယ်၍ (၁၃)အိမ်ထောင်အား နေရာချထား ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ မြေကွက် (၁၀)ကွက်ပတ်လည်ကို ဘုရားကျောင်းဆောက်ရန် စိစဉ်ခဲ့သော်လည်း သက်ဆိုင်ရာမှ ခွင့်ပြုချက်မရရှိသဖြင့် မဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။(၂၀၀၀) ပြည့်နှစ်တွင် မန္တလေးသာသနာလုံးဆိုင်ရာ မာရီးယား တမန်တော် အစည်းအဝေးကြီးကို ချောင်းရိုးရွာမှ တာဝန်ယူ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းအစည်းအဝေးပွဲမှ ချောင်းရိုး၊ ရေဦး၊ မုံလှ၊ ချမ်းသာရွာတို့ ပါဝင်သော ဒေသဆိုင်ရာ မာရီးယား တမန်တော် ကူရီးယားကို ဖွဲ့စည်း နိုင်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၄)ခုနှစ်တွင် ဖါသာရ်နီကောလားစ် ပြုံးချိုသည် ရေဦး၌ ရဟန်းသိက္ခာခံယူခဲ့သည်။ (၁၉၉၅) ခုနှစ်မှ (၂၀၀၁)ခုနှစ်အထိ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရေဦးမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၇) ခုနှစ် မတ်လတွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်သဖြင့် ရေဦးမြို့ရှိ ဘုရားကျောင်းမှာ အမိုးများနှင့် ထုပ်တန်းများ ပြိုကျ ပျက်စီးခဲ့သည်။ အမည်မဖေါ်လို အလှူရှင်တစ်ဦး၏ အလှူငွေဖြင့် သာသနာ့အကျိုးဆောင် ဦးဝိုင်လေးခေါ် ဦးလှမြင့်နှင့် အင်ဂျင်နီယာ ဦးဇော်မိုးထွန်းတို့က ဦးစီးကာ (၁၉၉၈)ခု ဒီဇင်ဘာလ (၈)ရက်နေ့တွင် ဘုရားကျောင်း အုတ်မြစ်ချခဲ့သည်။ ရေဦးမြို့တွင် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ဖွင့်ခဲ့ရာ ကျောင်းသား (၃၀)ခန့်အထိ ရှိခဲ့သည်။ ဖါသာရ်ဂျော့ ဦးခင်မောင်ထွေး လက်ထက်တွင် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသို့ ကျောင်းသား (၄၀)ယောက် ပို့နိုင်ခဲ့သည်။ ရေဦးမြို့ ဘုရားကျောင်းသစ်ကို အ၀င်မျက်နှာစာနှင့် ဘုရားစင်ပရ၀ုဏ်အတွင်း ကြွေပြားများ ခင်းနိုင်ခဲ့သည်။ မျက်နှာကျက်ကို ကျွန်းပြားများ တပ်ဆင်ပြီးခဲ့သည်။
(၂၀၀၂)ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့ ကာသီဒရယ် ရွှေနှလုံးတော် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး အဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်းရသည်။ ကာသီဒရယ် ဘုရားကျောင်း ဘုရားစင် ပရ၀ုဏ်နှင့် သင်ခန်းလဲခန်းကို ကြွေပြားများ ခင်းနိုင်ခဲ့သည်။ မယ်တော်ဂူလိုင်ရှေ့တွင် ပလ္လင်ခံ၍ အလူမီနီယံ လက်ကိုင်များ တတ်ဆင်နိုင်ခဲ့သည်။ ရွှေနှလုံးတော် ဗိမ္မာန်ကိုလည်း တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 10:02 PM